Tababaraha Liverpool ayaa saadaaliyey in kooxda Chelsea ay tahay tan ugu cadcad ee ku guuleysan… – Hagaag.com
Tababaraha Liverpool ayaa saadaaliyey in kooxda Chelsea ay tahay tan ugu cadcad ee ku guuleysan…
Posted on 6 Diseembar 2020 by Admin in Sports // 0 Comments
Tababaraha Liverpool Juergen Klopp, oo kooxdiisa heysata horyaalnimada Premier League ee England, ayaa sheegay in Chelsea ay tahay musharaxa ugu cadcad ee ku guuleysan kara horyaalka xilli ciyaareedkan, marka loo eego xoogga iyo culeyska kooxda reer London ee uu hoggaamiyo tababare Frank Lampard.
Lampard ayaa dib u habeyn ku sameeyay kooxda Chelsea taasoo ku kacday lacag dhan 220 milyan oo ginni ($ 295.64 milyan) intii lagu jiray suuqii xagaaga ee dhawaa. Ka dib bilow hoose, kooxda waxay ku guuleysatay inay ka fogaato guuldaradii 16kii kulan ee tartamada oo dhan.
Guushii 3-1 ee ay ka gaareen Leeds United kulankii xalay ka dhacay Stamford Bridge ayaa Lampard ku riixday inuu kaalinta koowaad ka galo 20ka koox ee horyaalka ka dhisan isagoo leh 22 dhibcood, wuxuu hal dhibic ka sarreya Tottenham iyo Liverpool ka hor kulamadooda maanta.
Kahor kulanka Liverpool ee Wolverhampton Axada, Klopp ayaa u sheegay suxufiyiinta, “Marka aan daawado kulamada kubada cagta xilligan, Chelsea waxay ila tahay fikirkeyga mida ugu cadcad hanashada horyaalka. Waxay leedahay xulashooyin fara badan, sidoo kale waxay leedahay laacibiin waaweyn oo soo bandhigga ciyaar qurux badan, sidoo kale waxay leedahay laacibiin fiican oo lagu beddelo kuwa garoonka ku jira. “
In kasta oo Liverpool ahayd kooxda kaliya ee 6 dhibcood ku hogaamineysay horaantii marxaladan xilli ciyaareedkan, qaab ciyaareedkoodii xilli ciyaareedkan waxa saamayn ku yeeshay tartamo ciyaaro badan iyo xaalado badan oo dhaawac ah oo ka jiray gudaha kooxda.
Klopp ayaa filaya in dagaalka horyaalku xilli ciyaareedkan uu yahay mid furnaan doono uusan aheyn sidii uu ahaa xilli ciyaareedyadii hore.